Nkọwapụta --lọ ọrụ - Jiangsu Aolong new technology technology development Co., Ltd.
Jiangsu Aolong ọhụrụ ihe technology technology Co., Ltd. bụ ọkachamara enterprise raara nye R & D na ngwa nke ime ụlọ yujingshi n'ala. The ụlọ ọrụ tumadi na-elekwasị anya na "Aolong" ika yujingshi n'ala.
Aolong bu ihe di egwu na ohuru ohuru, ya na ahihia, nchedo gburugburu ebe obibi, carbon di ala, ike nchekwa dika echiche ika, mgbe otutu otutu nyocha na nyocha na mmepe nke ndi otu. Amuru Jade crystal floor! Yujingshi usoro flooring nwere àgwà nke dị oké ọnụ ahịa eke osisi, ibu ogologo ọrụ ndụ, ibu ike nkịtị Njirimara, waterproof na ire ọkụ retardant, mgbochi ebu na mgbochi termite, wdg! Site na imepụta ngwaahịa na mmepe, mmepụta, ntinye, ntinye akwụkwọ na akụkụ ndị ọzọ, Aolong na-enye ndị ahịa otu ọrụ na-akwụsị ọrụ niile.
Anyị na ngwaahịa na-exported karịa mba iri na Europe, North America, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na na, na-ekwenyere ndị mbụ na klas ezigbo ụlọ ọrụ na-emepụta n'ụlọ na mba ọzọ. Site na ikike nke teknụzụ ọhụụ na nkwa nke ụkpụrụ ụwa, anyị ga-aga n'ihu na-ejere ndị ahịa n'ụlọ na mba ofesi, ma jiri ezi obi na-akpọ ndị ọkachamara sitere na ụdị ndụ niile ịkwado na ịzụlite ọnụ.
Tinyere ihe ọhụrụ
Jiangsu Aolong New Ihe Technology Development Co., Ltd.
Factory ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa?
a: Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke anyị.
a ： EE, 100% mmiri na-adịghị.
Ndi ihe nlere gi di?
a ： A na-enweta ihe nlele n'efu. Nwere ike ịhọrọ site na ngwaahịa anyị, ma ọ bụ ịnwere ike ịme ihe nlele dịka ihe ị chọrọ, mana ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ego awara awara.
Nwere ike ị na-enye mbukota Designes dị ka ndị ahịa 'chọrọ?
a: N'ezie. Anyị nwere ike ibipụta igbe ndị dị ka ihe ị chọrọ
Nwere ike ị OEM / ODM?
a: Ee, anyị na ngwaahịa nwere ike mere dị ka tto gị chọrọ.
a: Ọ dabere n'usoro gị, mana ọ ga - abụ ụbọchị 15-30 mgbe ị nwetara nkwụnye ego.
Kedu maka usoro ịkwụ ụgwọ gị?
a: Anyị ugwo okwu bụ site T / T, 30% dị ka nkwụnye ego, itule site T / T ma ọ bụ L / C tupu Mbupu ..
Gịnị bụ gị usoro nke nnyefe?
a: FOB, CFR, CIF, BW
Bụ ihe ngwọta kachasị elu nke ụlọ ọrụ anyị
a nwalere usoro anyị nwetala wee merie anyị asambodo ikike anyị nwere.